အကတိုက် မယ် ထင် လို့ ဟော်တယ် ကို လိုက်သွား တာပါ လို့” ရှေ့နေ၏မေးမြန်းချက်ကို ဖြေကြား ခဲ့ တဲ့ “သင်းသင်း..” – Zartiman
အကတိုက် မယ် ထင် လို့ ဟော်တယ် ကို လိုက်သွား တာပါ လို့” ရှေ့နေ၏မေးမြန်းချက်ကို ဖြေကြား ခဲ့ တဲ့ “သင်းသင်း..”
ရှေ့နေမေး…… မသင်းသင်းဦး အနေဖြင့် ကိုဝေဠုကျော်က ဟိုတယ်သို့သွားမည် ဟုပြောသောလည်း တစုံတရာငြင်း ဆန်ခြင်းမရှိပဲ လိုက်ပါလာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည် ဆိုလျှင်…? မသင်းသင်းဦးဖြေ….. မဟုတ်ပါ။ရှေ့နေမေး…… ဟိုတယ်ကောင်တာ တွင်လည်းအခန်းငှားသည် သိလျှက်နှင့်ကျမ အနေဖြင့် တစုံတရာငြင်းဆန်ခြင်း မရှိပဲ အခန်းထဲသို့ လိုက်သွားသည်ဆိုလျှင် ဟုတ်ပါသလား…? မသင်းသင်းဦးဖြေ…… မဟုတ်ပါ။ရှေ့နေမေး….. အခန်းထဲသို့ မည်သည်ကြောင့်ရောက်သွားခဲ့လည် ဆိုလျှင်…?
မသင်းသင်းဦးဖြေ…… ကျမအနေဖြင့် ဟိုတယ်တွင် အကတိုက် မည် ထင်သောကြောင့် အခန်းထဲသို့ လိုက်သွားခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး အခန်းထဲ ရောက်သည့်အခါ ကျမအနေဖြင့် ဟိုတယ်မှန်းမသိပါ အကတိုက် ရန်သွား၍ လိုက်သွားခြင်းဖြစ်ပါသည် ကျမအခန်းထဲ ရောက်သည့် အခါ မည်သူမှမရှိပဲ ကိုဝေဠုကျော်က ခဏကြလျှင်ပြန်လိုက်ပို့ပေးမည် ဟုပြောသောကြောင့် ကျမအနေဖြင့် ယုံကြည်ပြီး အခန်းထဲသို့ လိုက် သွားခြင်းဖြစ်ပါသည်။အခန်းထဲရောက်သည် အခါ ကိုဝေဠုကျော်မှ ချက်ချင်းထွက်မသွားသေးပဲ ကျမနဲ့အတူ စကားပြောနေခဲ့ပါသည်။
ကိုဝေဠုကျော်က ထမင်းကြော်မှာ ထားပေးခဲ့ပြီး ခဏနေတွင်ပြန်လာမည် ဟုပြောပြီးပြန်လည် ထွက်သွားပါသည်။ရှေ့နေမေး……. အခန်း ထဲရောက်သည့် အခါဟိုတယ်ရောက်မှန်း သိသလားဆိုလျှင်..? မသင်းသင်းဦးဖြေ…….. အခန်းထဲရောက်မှ ဟိုတယ် မှန်းသိပါသည်။ ရေု့နေမေး….. ကောင်တာတွင် သော့ယူပြီးအခန်းငှားသည် အချိန်နှင့် ဟိုတယ်ရေု့တွင် ချိတ်ထားသော ဟိုတယ်ဆိုင်းဘုတ် အားမြင်စဉ် အချိန်ကလည်း ကျမအနေနဲ့ ဟိုတယ်မှန်း သိသလားဆိုလျှင်..? မသင်းသင်းဦးဖြေ….. အခန်းငှားမည်.။
အချိန်က ကျမကားပေါ် ကျန်နေခဲ့ပြီး အခန်းငှားသည်ကို မသိပါ သွားစဉ်အချိန်က sponsar ပေး️ထားသည့် ဟိုတယ်သို့ သွားခြင်း ကိုတော့ သိပါသည်။ရှေ့နေမေး…… ကျမအနေဖြင့် ညအချိန် မတော်ယခုမှသိ သည့် အမျိုးသား တစ်ဦးနှင့်ဟိုတယ် မလိုက်သင့်ကြောင်းသိလား ဆိုလျှင်..?မသင်းသင်းဦးဖြေ……. သိပါသည် ကိုဝေဠုကျော် လိုက်ပို့သည့် အချိန်က ကျမတစ်ဦးထဲ မဟုတ်ပဲ မိတ်ကပ်ပြင်ဆရာ တစ်ဦးပါပါ သည် လမ်းခရီးတွင် ကိုဝေဠုကျော်မှ ကျမအား အနုပညာကိစ္စများမေးမြန်းပြီး ပြန်ဖြေရင်း ။
စကားမပြတ်သဖြင့် အပြင်ဆိုင်တဆိုင်တွင် တခုခု စားရင်း စကားပြောမည် ဟုပြောကာ ကားမောင်းသွားခဲ့ပါသည် ။ရှေ့နေမေး…. ကျမတို့ ဟိုတယ်သို့သွားရာ လမ်းတလျှောက်တွင် ကိုဝေဠုကျော်မှကျမအား ချစ်ကြောင်း ကြိုက်ကြောင်း တစ်စုံတစ်ရာပြောဆိုခဲ့ခြင်း မရှိဆိုလျှင် …? မသင်းသင်းဦးဖြေ……. မရှိပါ။အား လုံး သိချင်နေကြတဲ့ မသင်းသင်းဦး Vs ကိုဝေဠုကျော် အမှု သတင်းထူး…(ပထမဆုံး)အကြိမ် ဝေဠု ကျော်၏ရှေ့နေမှ မသင်းသင်းဦးအား ပြန်လည်စစ်မေးချက်များပါ။
ရှေ့နေမေး ….. မသင်းသင်းဦး သက်သေခံ တင်သွင်းထားတဲ့ ဓာတ်ပုံ ထဲက ကိုဝေဠုကျော် နဲ့ တွဲရိုက်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံက ပထမဦးဆုံး မိတ်ဆက်ပေးတုန်းက တွဲရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံ ဟုတ်ပါသလား ..?အကတိုက်မယ်ထင်လို့ ဟော်တယ် ကို လိုက်သွားတာပါလို့ ဖြေကြား ခဲ့တဲ့ သင်းသင်း..။မသင်းသင်းဦးဖြေ…… ဟုတ်ပါတယ်။ရှေ့နေမေး….. မသင်းသင်းဦး နှင့် ကိုဝေဠုကျော်တို့ လမ်းတွင် ရပ်စကားပြောနေသည့် ဓာတ်ပုံမှာ မသင်းသင်းဦး၏ သူငယ်ချင်းက ကြိုတင်ရိုက်ကူးထားရန် အတွက် မှာကြာထားခြင်းဖြစ်သည် ဆိုလျှင် မှန်ပါသလား…?
မသင်းသင်းဦးဖြေ ….. မဟုတ်ပါ ကျမ တို့သမီးရည်းစား နှစ်ဦးစကားများနေသည့် အတွက် သူငယ်ချင်းက ရိုက်ကူးပေးထားသည်ကို နောက် မှသိရှိခြင်းဖြစ်ပါသည်။ရှေ့နေမေး ….. ကျမသည် ကိုစူပါ အား ကိုဝေဠုကျော် နှင့် မိတ်ဆက်ပေး ရန် အကူညီတောင်းခဲ့သည် ဆိုလျှင် ဟုတ်ပါသလား…?မသင်းသင်းဦးဖြေ….. မဟုတ်ပါ။ရှေ့နေမေး… ထိုသို့ မိတ်ဆက်ပေးစဉ် အချိန်က ကိုဝေဠုကျော်က ဘယ်မှာ နေပြီး ကျမကဘယ်မှာနေထိုင်ကြောင်း တစ်ဦး နှင့် တစ်ဦး အပြန်အလှန်ပြောခဲ့ကြသေးသလား ဆိုလျှင်…?။
မသင်းသင်းဦးဖြေ … မရှိခဲ့ပါဘူးရှေ့နေမေး…. ထိုနေ့ညက အတူပြန်လာရာတွင် ကျမ၏နေအိမ်သို့ အရင်ရောက်ပြီးမှ ကိုဝေဠုကျော်အိမ်သို့ ရောက်နိုင်သော ခရီးဖြစ်သည်ဆိုလျှင်…?မသင်းသင်းဦးဖြေ…… မှန်ပါသည်။ရှေ့နေမေး….. ကျမ အနေဖြင့် ကိုဝေဠုကျော်အား ကျမအိမ်သို့ အရင်လိုက်ပို့ရန်ပြောဆိုခြင်း မရှိ ဆိုလျှင်..?။မသင်းသင်းဦးဖြေ….. ပြောခဲ့ပါသည်။ရှေ့နေမေး…… ပထမဆုံး အကြိမ်ကာမရယူစဉ် အချိန် အထိ ကိုဝေဠုကျော်မှ ကျမအား လက်ထပ်ပေါင်းသင်းပါမည် ဟုပြောဆိုထားခဲ့ခြင်း မရှိဆိုလျှင်…?
မသင်းသင်းဦးဖြေ…… မပြောခဲ့ပါ ကာမယူပြီးမှပြောဆို ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ရှေ့နေမေး……. မသင်းသင်းဦး ကိုဝေဠုကျော် နဲ့ပတ်သက်တဲ့ အသံဖိုင်တွေကို ဘယ်အချိန်က ဖမ်းယူခဲ့တာလည်း ကျမ အနေဖြင့် ကိုဝေဠုကျော်နှင့် ပတ်သတ်ပြီး ဘယ်နှစ်လခန့်အကြာတွင် အသံဖိုင်များ စတင်ဖမ်းယူခဲ့လည်းဆိုလျှင်..?
မသင်းသင်းဦးဖြေ……. ဖမ်းယူခဲ့ခြင်းတော့ မရှိပါကျမဖုန်းတွင် Auto️ Record ပါ၍ ဖမ်းမိထားခြင်းဖြစ်ပါသည်
ရှေ့နေမေး …. ကျမတင်သွင်းခဲ့သည် သက်သေခံ အသံဖိုင်များအားလုံးတွင် ကိုဝေဠုကျော်မှ ကျမအားလက်ထပ်ပေါင်းသင်းပါမည်ဟု ကတိ ပေး ပြောကြားထားတဲ့ တစ်စုံတရာ မပါဆိုလျှင်…?။မသင်းသင်းဦးဖြေ….. ပါပါသည်။ရှေ့နေမေး….. စာမျက်နှာ ဘယ်လောက်တွင်ပါ သလဲ ဆိုလျှင်ရှာပြပါဟု ရှေ့နေမှရှာခိုင်းသောအခါ ။ရုံးချိန် ၁၁ နာရီကျော်မှ ရုံးချိန် ၁၂ နာရီထိတင် သွင်းထားသော အသံဖိုင် သက်သေ ခံ စာ မျက်နှာ ပေါင်း ၈၀၀ ကျော်မှရှာဖွေရာ ၁ မှ ၂၃၅ မျက်နှာအထိ လက်ထပ်ပေါင်းသင်းပါမည်ဟု ကတိပေးထားသော စကားမပါရှိသေးပဲ ရုံးချိန် ရပ်နားခဲ့ကြပါသည် နောက်တစ်ပတ်ရုံးချိန် ၁၇.၇. ၂၀၂၀ မှာ ဖြစ်သောကြောင့် ဆက်လက် ဖော်ပြပေးသွားပါမည်။
အကတိုကျ မယျ ထငျ လို့ ဟျောတယျ ကို လိုကျသှား တာပါ လို့” ရှနေ့ေ၏မေးမွနျးခကျြကို ဖွကွေား ခဲ့ တဲ့ “သငျးသငျး..”
ရှနေ့မေေး…… မသငျးသငျးဦး အနဖွေငျ့ ကိုဝဠေုကြျောက ဟိုတယျသို့သှားမညျ ဟုပွောသောလညျး တစုံတရာငွငျး ဆနျခွငျးမရှိပဲ လိုကျပါလာခဲ့ခွငျးဖွဈသညျ ဆိုလြှငျ…? မသငျးသငျးဦးဖွေ….. မဟုတျပါ။ရှနေ့မေေး…… ဟိုတယျကောငျတာ တှငျလညျးအခနျးငှားသညျ သိလြှကျနှငျ့ကမြ အနဖွေငျ့ တစုံတရာငွငျးဆနျခွငျး မရှိပဲ အခနျးထဲသို့ လိုကျသှားသညျဆိုလြှငျ ဟုတျပါသလား…? မသငျးသငျးဦးဖွေ…… မဟုတျပါ။ရှနေ့မေေး….. အခနျးထဲသို့ မညျသညျကွောငျ့ရောကျသှားခဲ့လညျ ဆိုလြှငျ…?
မသငျးသငျးဦးဖွေ…… ကမြအနဖွေငျ့ ဟိုတယျတှငျ အကတိုကျ မညျ ထငျသောကွောငျ့ အခနျးထဲသို့ လိုကျသှားခဲ့ခွငျး ဖွဈပွီး အခနျးထဲ ရောကျသညျ့အခါ ကမြအနဖွေငျ့ ဟိုတယျမှနျးမသိပါ အကတိုကျ ရနျသှား၍ လိုကျသှားခွငျးဖွဈပါသညျ ကမြအခနျးထဲ ရောကျသညျ့ အခါ မညျသူမှမရှိပဲ ကိုဝဠေုကြျောက ခဏကွလြှငျပွနျလိုကျပို့ပေးမညျ ဟုပွောသောကွောငျ့ ကမြအနဖွေငျ့ ယုံကွညျပွီး အခနျးထဲသို့ လိုကျ သှားခွငျးဖွဈပါသညျ။အခနျးထဲရောကျသညျ အခါ ကိုဝဠေုကြျောမှ ခကျြခငျြးထှကျမသှားသေးပဲ ကမြနဲ့အတူ စကားပွောနခေဲ့ပါသညျ။
ကိုဝဠေုကြျောက ထမငျးကွျောမှာ ထားပေးခဲ့ပွီး ခဏနတှေငျပွနျလာမညျ ဟုပွောပွီးပွနျလညျ ထှကျသှားပါသညျ။ရှနေ့မေေး……. အခနျး ထဲရောကျသညျ့ အခါဟိုတယျရောကျမှနျး သိသလားဆိုလြှငျ..? မသငျးသငျးဦးဖွေ…….. အခနျးထဲရောကျမှ ဟိုတယျ မှနျးသိပါသညျ။ ရေု့နမေေး….. ကောငျတာတှငျ သော့ယူပွီးအခနျးငှားသညျ အခြိနျနှငျ့ ဟိုတယျရေု့တှငျ ခြိတျထားသော ဟိုတယျဆိုငျးဘုတျ အားမွငျစဉျ အခြိနျကလညျး ကမြအနနေဲ့ ဟိုတယျမှနျး သိသလားဆိုလြှငျ..? မသငျးသငျးဦးဖွေ….. အခနျးငှားမညျ.။
အခြိနျက ကမြကားပျေါ ကနျြနခေဲ့ပွီး အခနျးငှားသညျကို မသိပါ သှားစဉျအခြိနျက sponsar ပေး️ထားသညျ့ ဟိုတယျသို့ သှားခွငျး ကိုတော့ သိပါသညျ။ရှနေ့မေေး…… ကမြအနဖွေငျ့ ညအခြိနျ မတျောယခုမှသိ သညျ့ အမြိုးသား တဈဦးနှငျ့ဟိုတယျ မလိုကျသငျ့ကွောငျးသိလား ဆိုလြှငျ..?မသငျးသငျးဦးဖွေ……. သိပါသညျ ကိုဝဠေုကြျော လိုကျပို့သညျ့ အခြိနျက ကမြတဈဦးထဲ မဟုတျပဲ မိတျကပျပွငျဆရာ တဈဦးပါပါ သညျ လမျးခရီးတှငျ ကိုဝဠေုကြျောမှ ကမြအား အနုပညာကိစ်စမြားမေးမွနျးပွီး ပွနျဖွရေငျး ။
စကားမပွတျသဖွငျ့ အပွငျဆိုငျတဆိုငျတှငျ တခုခု စားရငျး စကားပွောမညျ ဟုပွောကာ ကားမောငျးသှားခဲ့ပါသညျ ။ရှနေ့မေေး…. ကမြတို့ ဟိုတယျသို့သှားရာ လမျးတလြှောကျတှငျ ကိုဝဠေုကြျောမှကမြအား ခဈြကွောငျး ကွိုကျကွောငျး တဈစုံတဈရာပွောဆိုခဲ့ခွငျး မရှိဆိုလြှငျ …? မသငျးသငျးဦးဖွေ……. မရှိပါ။အား လုံး သိခငျြနကွေတဲ့ မသငျးသငျးဦး Vs ကိုဝဠေုကြျော အမှု သတငျးထူး…(ပထမဆုံး)အကွိမျ ဝဠေု ကြျော၏ရှနေ့မှေ မသငျးသငျးဦးအား ပွနျလညျစဈမေးခကျြမြားပါ။
ရှနေ့မေေး ….. မသငျးသငျးဦး သကျသခေံ တငျသှငျးထားတဲ့ ဓာတျပုံ ထဲက ကိုဝဠေုကြျော နဲ့ တှဲရိုကျထားတဲ့ ဓာတျပုံက ပထမဦးဆုံး မိတျဆကျပေးတုနျးက တှဲရိုကျထားတဲ့ဓာတျပုံ ဟုတျပါသလား ..?အကတိုကျမယျထငျလို့ ဟျောတယျ ကို လိုကျသှားတာပါလို့ ဖွကွေား ခဲ့တဲ့ သငျးသငျး..။မသငျးသငျးဦးဖွေ…… ဟုတျပါတယျ။ရှနေ့မေေး….. မသငျးသငျးဦး နှငျ့ ကိုဝဠေုကြျောတို့ လမျးတှငျ ရပျစကားပွောနသေညျ့ ဓာတျပုံမှာ မသငျးသငျးဦး၏ သူငယျခငျြးက ကွိုတငျရိုကျကူးထားရနျ အတှကျ မှာကွာထားခွငျးဖွဈသညျ ဆိုလြှငျ မှနျပါသလား…?
မသငျးသငျးဦးဖွေ ….. မဟုတျပါ ကမြ တို့သမီးရညျးစား နှဈဦးစကားမြားနသေညျ့ အတှကျ သူငယျခငျြးက ရိုကျကူးပေးထားသညျကို နောကျ မှသိရှိခွငျးဖွဈပါသညျ။ရှနေ့မေေး ….. ကမြသညျ ကိုစူပါ အား ကိုဝဠေုကြျော နှငျ့ မိတျဆကျပေး ရနျ အကူညီတောငျးခဲ့သညျ ဆိုလြှငျ ဟုတျပါသလား…?မသငျးသငျးဦးဖွေ….. မဟုတျပါ။ရှနေ့မေေး… ထိုသို့ မိတျဆကျပေးစဉျ အခြိနျက ကိုဝဠေုကြျောက ဘယျမှာ နပွေီး ကမြကဘယျမှာနထေိုငျကွောငျး တဈဦး နှငျ့ တဈဦး အပွနျအလှနျပွောခဲ့ကွသေးသလား ဆိုလြှငျ…?။
မသငျးသငျးဦးဖွေ … မရှိခဲ့ပါဘူးရှနေ့မေေး…. ထိုနညေ့က အတူပွနျလာရာတှငျ ကမြ၏နအေိမျသို့ အရငျရောကျပွီးမှ ကိုဝဠေုကြျောအိမျသို့ ရောကျနိုငျသော ခရီးဖွဈသညျဆိုလြှငျ…?မသငျးသငျးဦးဖွေ…… မှနျပါသညျ။ရှနေ့မေေး….. ကမြ အနဖွေငျ့ ကိုဝဠေုကြျောအား ကမြအိမျသို့ အရငျလိုကျပို့ရနျပွောဆိုခွငျး မရှိ ဆိုလြှငျ..?။မသငျးသငျးဦးဖွေ….. ပွောခဲ့ပါသညျ။ရှနေ့မေေး…… ပထမဆုံး အကွိမျကာမရယူစဉျ အခြိနျ အထိ ကိုဝဠေုကြျောမှ ကမြအား လကျထပျပေါငျးသငျးပါမညျ ဟုပွောဆိုထားခဲ့ခွငျး မရှိဆိုလြှငျ…?
မသငျးသငျးဦးဖွေ…… မပွောခဲ့ပါ ကာမယူပွီးမှပွောဆို ခဲ့ခွငျးဖွဈပါသညျ။ရှနေ့မေေး……. မသငျးသငျးဦး ကိုဝဠေုကြျော နဲ့ပတျသကျတဲ့ အသံဖိုငျတှကေို ဘယျအခြိနျက ဖမျးယူခဲ့တာလညျး ကမြ အနဖွေငျ့ ကိုဝဠေုကြျောနှငျ့ ပတျသတျပွီး ဘယျနှဈလခနျ့အကွာတှငျ အသံဖိုငျမြား စတငျဖမျးယူခဲ့လညျးဆိုလြှငျ..?
မသငျးသငျးဦးဖွေ……. ဖမျးယူခဲ့ခွငျးတော့ မရှိပါကမြဖုနျးတှငျ Auto️ Record ပါ၍ ဖမျးမိထားခွငျးဖွဈပါသညျ
ရှနေ့မေေး …. ကမြတငျသှငျးခဲ့သညျ သကျသခေံ အသံဖိုငျမြားအားလုံးတှငျ ကိုဝဠေုကြျောမှ ကမြအားလကျထပျပေါငျးသငျးပါမညျဟု ကတိ ပေး ပွောကွားထားတဲ့ တဈစုံတရာ မပါဆိုလြှငျ…?။မသငျးသငျးဦးဖွေ….. ပါပါသညျ။ရှနေ့မေေး….. စာမကျြနှာ ဘယျလောကျတှငျပါ သလဲ ဆိုလြှငျရှာပွပါဟု ရှနေ့မှေရှာခိုငျးသောအခါ ။ရုံးခြိနျ ၁၁ နာရီကြျောမှ ရုံးခြိနျ ၁၂ နာရီထိတငျ သှငျးထားသော အသံဖိုငျ သကျသေ ခံ စာ မကျြနှာ ပေါငျး ၈၀၀ ကြျောမှရှာဖှရော ၁ မှ ၂၃၅ မကျြနှာအထိ လကျထပျပေါငျးသငျးပါမညျဟု ကတိပေးထားသော စကားမပါရှိသေးပဲ ရုံးခြိနျ ရပျနားခဲ့ကွပါသညျ နောကျတဈပတျရုံးခြိနျ ၁၇.၇. ၂၀၂၀ မှာ ဖွဈသောကွောငျ့ ဆကျလကျ ဖျောပွပေးသှားပါမညျ။
ကမ္ဘာ့ရွှေဈေးစံချိန်တင် မြင့်တက်နေချိန် အတွင်း ပြည်တွင်းရွှေဈေး (၁၃)သိန်းကျော်အထိ ရောက်ရှိလာ
စက်သုံးဆီအရောင်းဆိုင် (၄၀) ကျော် လိုင်စင် ပိတ်သိမ်းလိုက်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ကြေငြာ
(၁၀-၇-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ ည (၈:၀၀)နာရီCOVID-19 ရောဂါနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း